Nlere ulo kacha mma maka umuaka - Ikkaro
Nyocha maka ụmụaka
N'ime nyocha nke ụlọ ọ bụ iwu na enwere ebe pụrụ iche maka ihe a na-akpọ nnwale ụlọ maka ụmụaka. Ha bụ nnwale dị mfe nke ụmụaka nwere ike ime ma ọ bụ naanị ha ma ọ bụ ndị okenye so wee mee ha "n'ụlọ", ya bụ, iji nweta ihe dị mfe ma dịkwa ọnụ ala.
Nnwale ndị dị mfe na mepụtara, nke na-azakarị maka ụfọdụ ihe anụ ahụ na nke na-enye anyị ohere ọ bụghị naanị itu ụmụaka na ndị na-eto eto n'anya, kamakwa ịkọwapụta ọdịdị anụ ahụ na-akpata mmeghachi omume ndị a.
Kedu ihe kpatara ya? Gịnị na - eme ma ọ bụrụ na kama ịme otu a, m ga - eme ya otu a? Ma ọ bụ ọ bụrụ na m gbanwee ihe / ngwaahịa?
Ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị mgbe niile na ndị okenye na-elekọta ha ma ọ bụghị naanị iji hụ nchekwa nke nwatakịrị ahụ mana iji duzie ya. Nyere ya aka iche echiche, ịjụ onwe ya ajụjụ ndị kwesịrị ekwesị. Nyere gị aka ịchọta ozi ahụ ma jiri ngwaọrụ ndị dịịrị gị.
Ma eleghị anya, ihe kachasị mkpa iji nwee ike ịkpọte ọchịchọ gị maka ihe na ụwa gbara anyị gburugburu. Ihe okike, ịmata ihe, ịmụ ihe na nnukwu mbọ.
Havedị nnwale a na-amasị m oge niile mana ebe m nwere ụmụaka karịa :)
Ihe isi ike dị ka oge niile bụ ịmara otu esi ekesa ọdịnaya, nnwale na ihe eji eme ụlọ maka ụmụaka ọnụ, iche iche.
Ọfọn, ọ bụ ihe anyị na-atụ anya na ọ ga-edozi nke ọma. Echere m na anyị nwere nhazi ọdịnaya dị mma.
Nwee obi uto ma were izu ụka ghaa n’ihu, na ị ga-ahapụ gị na ụmụ gị. Ma ọ bụrụ na ị bụ onye nkuzi, alala azụ ịkpọrọ ha na klaasị.
Na mgbe ị na-eme ihe. Biko kwuo okwu gwa anyị etu o siri mee.
Achọrọ m ịnwale mee snow snow. Nke a bụ ọrụ aka nke ga - enyere anyị aka ịchọ mma ọmụmụ anyị na ekeresimesi ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị emee ihe nlere anya anyị na ụmụntakịrị ma anyị chọrọ inye ya mmetụ nke adị adị. Ma ọ bụ naanị iji mee ka aka ha ruru unyi ma nwee ikuku.
Agbalịrị m ụzọ 5 dị iche iche iji nwee snow na-enweghị atụ, m na-egosi ha ma jiri ya tụnyere isiokwu ahụ. Ntaneti juputara na Nkuzi banyere otu esi eme snow na diapers achọpụtara m na ọ bụ ọrụ mbibi na adabaghị maka ụmụaka.
Mgbe m nwesịrị nkụda mmụọ mbụ, enwere m mmasị na ahụmịhe pere mpe nke na achọgharịrị m ụzọ ọzọ iji mee ka snow na-eme n'ụlọ, n'ụzọ dị mma karị, n'ụzọ dị egwu nke ị nwere ike iji ụmụ gị mee. N'okpuru ị nwere ya niile.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ngwaahịa ngwaahịa inweta snow nke artificial, snow adịgboroja ma ọ bụ snow ozugbo, anyị na-akwado ndị a.
Hapụ Ka Ọ Na-ada,
Okpokwu (keakamere snow na ewute)
-Esi mee ka tonado
N'isiokwu a anyị na-ahapụ ọtụtụ ụzọ mụta nwa obere tonado n'ụlọ. Ọ mejupụtara na -emepụta ikuku mmiri na ... Nọgidenụ na-agụ ihe
Otu esi eme ink na-adịghị ahụ anya
Anyị kwere ụzọ atọ iji mee ink na-adịghị ahụ anya n'ụlọ na mfe.
Nke mbu na ikekwe ihe ndị kasị esi mejupụtara ewebata ígwè ajị shavings, nke anyị na-ewepụ ndị scourers n'ime ihe ọ juiceụ juiceụ lemon ma hapụ ka ọ zuru ike n’etiti ụbọchị asaa na iri na ise.
Inwe anaghị ahụ anya na lemon
Nleta anya ụlọ na mmiri ara ehi
Achọtala m onwe m maa jijiji ya na nke a yi na mfe n'ụlọ nnwale, ji:
Akwa na-agba agba - nnwale Chemistry
Na-akpali mmasị, ndị nnwale na ha na-eziga anyị n'ụlọ akwụkwọ nwa m nwanyị. Ọ bụ ihe gbasara a mfe nnwale iji mee ụmụ anyịAmaara m otu esi ewebata ha ọmarịcha ụwa nke sayensị, ọ bụ ezie na site na nke a anyị nwere ike ịkwado ha.
El mmadu Ihe mejupụtara ya bụ ọtụtụ ogige ndị na-arụ ọrụ a kapịrị ọnụ ma dị mkpa maka ya, dịka ọmụmaatụ, calcium nwere ọrụ nhazi (ike ọkpụkpụ). Mgbe itinye ọkpụkpụ pickled ma hapụ ya ruo ọtụtụ ụbọchị, ị nwere ike ịhụ otu ọ ga - esi dị nro ma nwedịrị ike ịgbada ma ọ bụ jiri mkpịsị aka gị mebie. Nke a bụ n'ihi na ọacetic acid (mmanya) ihe ngwọta "na-ezu ohi" mineral site na ọkpụkpụ site n'iso ha meghachi omume na ịmịpụta, dịka ọmụmaatụ, calcium acetate. N’ụzọ dị otu a, a na-ebelata ihe a na-eme ka a na-eme ka a osteoporosis gabiga ókè.